Saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo: Waa maxay ifafaaladan sideese u shaqaysaa | Saadaasha Shabakadda
Saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo Waa shay inta badan dadkoo dhami maqleen maanta. Inbadan waxay dhahaan saameynta aqalka dhirta lagu koriyo waxay sii kordheysaa heerkulka aduunka iyo kordhinta saameynta isbadalka cimilada. Waxay sidoo kale la xiriirtaa kuleylka adduunka. Laakiin miyay runti yaqaanaan doorka saameynta aqalka dhirta lagu koriyo, sida ay u dhacdo iyo saameynta ay ku leedahay meeraha?
Kahor sharraxaadda waxa ay tahay saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo, waxaan sameyn doonaa bayaan si aad ugu aqriso tan muhiimadda ay u leedahay: La'aanta saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo, noloshu ma jiri lahayn maanta sidaan ognahay maaddaama aysan suurtagal ahayn. Taasi waxay tiri, waxaan rajeynayaa inay hesho muhiimada ay mudan tahay.
1 Qeexitaanka Waxqabadka Greenhouse
2 Waa maxay gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo?
2.1 Uumiga biyaha
2.2 Kaarboon laba ogsaydh
2.4 Oksijiin oksaydh
3 Cawaaqibta saameynta aqalka dhirta lagu koriyo
4 Saamaynta xun ee gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo ku yeeshaan dadka
4.1 Roob Acid
4.2 Qiiqa sawirka
5 Maxaan sameyn karnaa si aan u yareyno saameynta aqalka dhirta lagu koriyo?
Qeexitaanka Waxqabadka Greenhouse
Waxa loogu yeero "saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo" waxay ka kooban tahay sare u kaca heerkulka meeraha waxaa keenay ficil ay sameeyeen koox gaasas gaar ah, qaar iyaga ka mid ah ay si wada jir ah u soo saareen bini-aadamku, kuwaas oo dhuuqa shucaaca infrared, kaasoo sababaya dusha sare ee dhulka iyo qaybta hoose ee lakabka hareeraha hareeraha ah inay kululaadaan. Waa ku mahadsan tahay saameynta aqalka dhirta lagu koriyo in nolosha Dunida ay suurtagal tahay, maadaama, haddii aysan tan ahayn, celceliska heerkulka wuxuu gaarayaa -88 digrii.
Waa maxay gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo?
Waxa loogu yeero gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo ama gaaska lagu koriyo, oo ka mas'uulka ah saameynta kor lagu sharaxay, waa:
Uumiga biyaha (H2O)
Oksijiin oksaydhyada (NOx)
In kasta oo dhammaantood (marka laga reebo CFCs) ay yihiin kuwo dabiici ah, laga soo bilaabo Kacaankii Warshadaha iyo inta badan iyada oo ay ugu wacan tahay isticmaalka xoogan ee shidaalka laydhka ah ee howlaha warshadaha iyo gaadiidka, waxaa si aad ah u kordhay xaddiga lagu sii daayay jawiga. Sifooyinka gaasaskan lagu koriyo waa taas hayn kuleylkaSidaa darteed, kolba inta ay ku urursan yihiin gaasaskan jawiga, kuleylka yar ayaa ka bixi kara.
Wax walba waxaa sii xumeynaya jiritaanka howlaha kale ee aadanaha, sida xaalufinta dhirta, taas oo xadiday awoodda dib u soo nooleynta jawiga si looga takhaluso kaarboon laba ogsaydhka, sababta ugu weyn ee saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo maadaama ay tahay tan maanta la sii daayo.
Uumiga biyaha (H2O) waa wax ku biiriyaha ugu weyn ee saameynta aqalka dhirta lagu koriyo waana midka sida tooska ah ugu xidhan cimilada oo, sidaas awgeed, ugu yaraan si toos ah ay u maamusho waxqabadka aadanaha. Tani waa sababta oo ah uumi bixintu waxay si xoog leh ugu xiran tahay heerkulka dusha sare (taas oo ay adag tahay in wax laga beddelo waxqabadka aadanaha, haddii aan tixgelinno aagagga waaweyn), iyo sababta oo ah uumiga biyuhu wuxuu dhex maraa jawiga wareegyo aad u dhakhso badan, oo soconaya xilli kasta. kalabar hal siddeed ilaa sagaalkii maalmoodba.
Kaarboon laba ogsaydhka (CO2) waxay ka caawisaa Dunida inay lahaato heer-kul lagu noolaan karo, illaa inta ay ku urursan tahay ay ku sii jirto xaddidan. Kaarboon laba ogsaydh la'aan, Dhulku wuxuu ahaan lahaa xayndaab baraf ah, laakiin dhinaca kale, xad-dhaafku wuxuu ka hortagaa bixitaanka kuleylka ee booska iyo sababaha kululaynta xad dhaafka ah ee meeraha. Waxay ka timaaddaa labada ilaha dabiiciga ah (Neefsashada, kala-daadashada walxaha dabiiciga ah, dabka dabiiciga ah ee dabiiciga ah) iyo anthropogenic (gubida shidaalka foosha, isbeddelada isticmaalka dhulka (inta badan xaalufinta dhirta), gubida biomass, howlaha warshadaha, iwm.
NASA waxay abuurtay fiidiyoow muujinaya carbon dioxide meeraha
Waa walax ku dhacda qaabka gaaska heerkulka iyo cadaadiska caadiga ah. Waa midab aan lahayn oo ay adag tahay in lagu milmo biyaha wejigiisa dareeraha ah. 60% qiiqa ka baxa adduunka oo dhan waa asal ahaan anthropogenic, badanaa laga helo beeraha iyo howlaha kale ee aadanaha. In kasta oo ay iyaduna ka soo jeedo burburka qashinka dabiiciga ah, ilaha dabiiciga ah, soo saarista shidaalka foosha, iwm. Xaaladaha aan oksijiin jirin.
Oksijiin oksaydhyada (NOX) waa iskuxiraha nitrogen iyo oksijiin gaaska sameeya oo kujira ku gubida ogsijiin saa'id ah iyo kuleyl badan. Waxaa hawada looga sii daayaa qiiqa baabuurta (gaar ahaan naaftada iyo gubashada caatada ah), gubashada dhuxusha, saliidda, ama gaaska dabiiciga ah, iyo inta lagu gudajiro howlaha sida alxanka qaansada, koronto-gelinta, qiiqa birta, iyo qarxinta firfircoon. .
Ozone (O3), heerkulka iyo cadaadiska, waa gaas aan midab lahayn oo ur ur leh, kaas oo ururintiisu badan tahay isu beddeli karta midab buluug ah. Hantideeda ugu weyni waa inay tahay oksaydh aad u xoog badan, iyada oo inta badan lagu yaqaan doorka muhiimka ah ee ay ka ciyaarto hawada. Ozonta 'Stratospheric Ozone' waxay u shaqeysaa sidii miiraha taas ma dhaafo shucaaca UV ee waxyeelada u leh dusha sare ee dhulka. Si kastaba ha noqotee, haddii ozone uu ku jiro aagga ugu hooseeya ee jawiga (troposphere), wuxuu sababi karaa, isku soo ururin ku filan, waxyeelo u geedaha.
Chlorofluorocarbons, oo sidoo kale loo yaqaan 'CFCs', waxaa laga soo qaatay hydrocarbons, iyadoo ay ugu wacan tahay xasilloonida jirka iyo kiimikada oo sareysa, ayaa si ballaaran loogu isticmaalay sidii qaboojiyeyaal, bakhtiiyeyaasha wakiiladda iyo aerosols. Soo-saaridda iyo adeegsiga chlorofluorocarbons ayaa laga mamnuucay Borotokoolka Montreal, maxaa yeelay waxay ku weeraraan lakabka ozone iyada oo loo marayo fal-celinta sawirka kiimikada. Hal tan oo CFC ah ayaa soo saari doonta saameyn kuleylka adduunka 100-ka sano ee ka dambeeya u-reebitaanka jawiga oo u dhiganta 4000 jeer isla saamiga kaarboon laba ogsaydhka (CO2).
Cawaaqibta saameynta aqalka dhirta lagu koriyo
Sidii aan horeyba u aragnay, saameynta aqalka dhirta lagu koriyo maahan "xun" filimkan, laakiin waa kororkiisa sii kordhaya. Maaddaama waxqabadyada aadanaha ay sii kordhayaan, waxaan aragnaa sida qiiqa hawada u sii daayo u sii kordhayo iyo sida mar kasta kordhi wax badan celceliska heerkulka meeraha. Tani waxay ku yeelan kartaa cawaaqib xumo aad u xun deegaanka iyo sidoo kale aadanaha iyo qaab nololeedkiisa
Cawaaqib xumada uu aqalka dhirta lagu koriyo keeni karo waa:
Kordhinta celceliska heerkulka meeraha.
Abaaraha ku soo kordhay meelaha qaar iyo daadadka meelaha kale.
Joogtaynta sare ee samayska duufaanka.
Sii dhalaalida horumarka ee koofiyadaha cirifka, oo ay sabab u tahay kor u kaca heerarka badda.
Kordhinta roobab heer caalami ah (waxay da'ayaan maalmo yar iyo in ka badan oo duufaan ah).
Kordhinta tirada maalmaha kulul, oo loo tarjumay hirarka kuleylka.
Burburinta nidaamka deegaanka.
Iyadoo dhawaan la saxeexay Heshiiska Paris Wadamada ansixiyay waxay damacsan yihiin inay yareeyaan qiiqa hawada ku sii daaya hawada, sidaas darteedna gacan ka geysanaya yareynta saameynta xun ee isbeddelka cimilada. Bulshada sayniska waxay sameeyeen daraasado dhowr ah kuwaas oo lagu soo gabagabeeyay in haddii celceliska heerkulka meeraha uu kordho in ka badan laba darajo Celsius, saameynta ay yeelanayso aan laga noqon karin. Taasi waa sababta ay u dejiyeen culeyska ugu badan ee CO2 meeraha at 400 ppm. Ilaa hadda, isku-uruurintaan ayaa la dhaafey laba sano oo xiriir ah.
Saamaynta xun ee gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo ku yeeshaan dadka
NO2 wuxuu sababi karaa saameyn caafimaad iyo fayoobaanta dadka, taasoo keenta cuncun ku dhaca xuubka sanka iyo waxyeela u geysata nidaamka neefsashada iyadoo la dhexgelinayo meelaha hoose ee sambabaha, iyo iyadoo lagu biirinayo sameynta roob acid.
Dhinaceeda, SO2 waxay la falgashaa biyaha cimilada si ay u soo saaraan roobka aashitada, waxay ka careysiisaa xab iyo indhaha waxayna keentaa qufac markii la neefsado Roobka Asiidku sidoo kale wuxuu ku yeelan karaa saameyn aan toos ahayn caafimaadka, maaddaama biyaha aashitada leh ay kala diri karaan biraha iyo walxaha sunta ah ee ka soo baxa carrada, dhagaxyada, marinnada iyo dhuumaha ka dibna u sii gudbiya nidaamyada biyaha la cabbo ee dadku cunaan, iyagoo soo saaraya sarkhaan.
Saamaynta ugu weyn ee gaasaskani ku yeeshaan deegaanka dabiiciga waa roobka aashitada. Ifafaalaha roobka aashitada (oo ay kujiraan barafka, cowska iyo sayaxa aashitada) wuxuu leeyahay cawaaqib xumo deegaanka, maxaa yeelay kuma koobna oo kaliya tayada biyaha, laakiin sidoo kale carrada, deegaanka iyo sidaas gaar ahaan dhirta. Saameynta kale ee roobka aashitada waa kordhinta aashitada biyaha cusub sidaas awgeedna kordhinta biraha culus ee sunta badan ee sababa burburka silsiladaha trophic-ka iyo habka taranka kalluunka, iyadoo lagu cambaareynayo wabiyada iyo harooyinka oo si tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah leh ugu dhexeysa.
Roobabku waxay sidoo kale saameyn xun ku leeyihiin deegaanka magaalada gudaheeda, dhinac dhinac, wasakhda dhismayaasha, nabaad-guurka dhagxaanta cathedral-ka iyo taallooyin kale oo taariikhi ah iyo, dhinaca kale, kalgacalka nidaamka neefsashada ee aadanaha, horay loo soo sheegay .
Saamaynta kale ee gaasaska aashitadu waa dhacdo loo yaqaan qiiqa; taas oo ah anshax xumo laga sameeyay midowga ereyada qiiq (qiiq) iyo ceeryaamo (ceeryaamo) waa nooc ka mid ah wasaqowga hawada oo ka dhashay ku darista qiiqa ceeryaamo (hal aerosol ilaa aerosol kale). Qiiqa cawlan ama qiiqa warshadaha waa wasaqowga hawada ay soo saarto danbas iyo baaruud. Isha ugu weyn ee wasakhda wasakhaysan ee ka qayb qaadata qiiqa cawdu waa gubashada dhuxusha, oo ku badnaan karta baaruudda. Waxaa jira qiiqa sawirka kiimikada laga soo qaado walxaha ay ku jiraan nitrogen iyo qiiqa gubashada baabuurta, oo lagu qasan yahay saamaynta shucaaca qoraxda ee soo saara gaaska ozone, oo suntiisu aad u sarreyso.
Maxaan sameyn karnaa si aan u yareyno saameynta aqalka dhirta lagu koriyo?
Siidaynta gaasasku waa in lagu xakameeyaa laba miisaan oo kala duwan, taas oo ku xidhan hadday tixraacayaan sii deynta baabuurta ama guud ahaan warshadaha.
Gawaarida waaweyn iyo matoorada gawaarida ayaa ah ilo aad muhiim ugu ah wasakhdaas. Si loo yareeyo qiiqa, waxaa lagugula talinayaa inaad u isticmaasho tallaabooyinka ka hortagga iyo nadaafadda labadaba gaasaska uu soo saaray matoorku intaan loo sii deynin hawada. Waxaad gacan ka geysan kartaa yareynta saameynta aqalka dhirta lagu koriyo tallaabooyinka soo socda:
Isticmaal gaadiid dadweyne, baaskiil wadid ama lugeyn.
Ku isticmaal matoorro teknolojiyada wasakheynta yar, tusaale ahaan, matoorada ku beddela shidaalka hadda jira shidaal wasakhow yar, tusaale ahaan, gaaska dabiiciga ah, aalkolada, hydrogen ama koronto.
Hagaajinta waxtarka matoorada si kiiloo mitir ka badan loogu sameeyo litir yar oo shidaal ah.
Wax ka beddel mishiinka si ay u yaraadaan qiiqa ka soo baxa.
Kordhinta sicirka iyo canshuuraha ay tahay in gawaarida ugu wasakhow badan ay bixiyaan ayna ku dhiiri galiyaan badalkooda kuwa cusub. Tani waxay ku dhiirrigelinaysaa kuwa sameeya baabuurta inay yareeyaan qiiqa oo ay ku dhiirrigeliyaan kuwa wax iibsanaya inay iibsadaan gawaari nadiif ah
Abuur aagagga lugeynaya ee xarumaha magaalada iyo, guud ahaan, xaddid wareegga gawaarida gaarka loo leeyahay meelaha qaarkood ee magaalooyinka.
Isticmaal gaadiidka dadweynaha oo badan
Tan waxaad ka baran kartaa wax badan oo ku saabsan saameyntan noo sii nooleyneysa laakiin sidoo kale waa muhiim in lagu hayo dheelitirnaan deggan oo ku filan si kordhinteeda aysan u keenin masiibooyinka cimilada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo
Maqaalka waa mid aad u xiiso badan, waan kugu hambalyeynayaa
Sawir iyo Muuqaal: Iftiiminta Waqooyiga Iftiiminta '' duufaanta '' Kanada
Waa maxay wabiyada Hawada